शुष्माले बोलाएर हैन् नवराज साथीको घर जान आएको भन्दै शुष्माको भाईले यसरी खोले र'ह'स्य : शुष्माको पेटको बच्चाको बा'स्त'विक'ता के हो ?(भिडियो) - Filmy News Portal Of Nepal
शुष्माले बोलाएर हैन् नवराज साथीको घर जान आएको भन्दै शुष्माको भाईले यसरी खोले र’ह’स्य, शुष्माको पेटको बच्चाको बास्तविकता के हो ?(भिडियो)
रुकुम-जाजरकोट घ”टनाले मुलुकमा एउटा त’रंग ल्याएको बेलामा त्यो घ’टनाका बारेमा विभिन्न कुरा आइरहेका छन् । गृह मन्त्रालयको सहसचिव स्तरिय टोलीले घ’टनाको छा’नविन पनि गरिरहेको छ । शुक्रवारवाट समितिले छा’नविन सुरु गरेको छ ।
गत जेठ १० गते भएको सो घ’टनामा ६ जनाको ज्या’न गएको छ । रुकुमवाट ठूलो हु’ल आएको देखेपछि नवराजको प्रेमिका भनिएकी युवतीका वुवाले वडाध्यक्षलाई फोन गरे । सो घ’टनाका बारेमा आफुले देखेको कुरा बताउँदै युवतीका भाई लक्ष्मण मल्लले भनेका छन्, यस अघि पनि नवराज घरमा आइसकेका कारण उनलाई आफुले चिनेका थिए ।
दिदीलाई लिएर नवराजले यस अघि पनि ल’फडा गरिसेका थिए । उनलाई जेठ १० गतेको घ’टना हुनुअघि पनि समातेर प्रहरीलाई बुझाइएको थियो । त्यसैले ठूलो हु’ल सहित फेरी नवराजलाई आएको देखेपछि आफ्नो वुवाले नजिकै घर भएका वडाध्यक्षलाई फोन गरेर सुनाए । वडाध्यक्षले आफुले प्रहरीलाई खबर गर्ने बताएका थिए । उनीहरुलाइ आफ्नो घर नजिकै देखेपछि युवतीको आमाले पनि उनीहरुलाई ल’क’डाउको बेलामा किन यता आएको ? भनेर प्रश्न गरेको बताए ।
आमाको यस्तो प्रश्न सुनेपछि नवराजको साथीहरुले काफल खान आएको हो भनेर ज’वाफ दिएका थिए । यस्तो कुरा हुँदै गर्दा एक जना युवाले नराम्रो शब्द बोलेर गा’ली गर्न सुरु गरेको युवतीका भाईले बताएका छन् । त्यसपछि केही वि’वाद भएको उनको भनाई छ । आमासंग त्यसरी वि’वाद पछि उनीहरु फर्केर गएर विनोद मल्लको घरमा पुगेको पनि आफुले थाहा पाएको बताए ।
उनीहरुले विनोद मल्लको घरमा गएर विनोद कहाँ छ ? भनेर सोधेका थिए । ठूलो हु’लमा आएका युवाले विनोद मल्ल कहाँ छ ? भन्दै सोध्दै हिडेको देखेपछि गाउँलेले सल्लाह गरेर प्रहरीलाई खबर गरेर प’क्रा’उ गर्ने भन्दै गएको उनले बताए । बारम्बार केटा आएर वि’वाद गर्न थालेपछि बुवा र परिवारका सदस्यले दिदीलाई तिम्रो प्रेम छ भनेर सोधेको बताएका छन् ।
उनले आफ्नो दिदीको नाममा धेरै फेसवुक आइडि बनाएर च’रित्र ह”त्या गर्ने काम भइरहेको बताइरहेका छन् । नवराजको आमाले छोराको बच्चा युवतीको पे’टमा छ भनेर गरेको दा’वी प्रति पनि उनले ख’ण्ड’न गरेका छन् । उनले त्यस्तो आ’रोप नलगाउन भनेका छन् । ल’कडाउन खुलेपछि २ सय केटा ल्याएर तेरो परिवारका सबै सदस्यलाई मा”र्छु भनेर दिदीलाई नवराजले ध’म्की दिएको दा’वी उनका भाईले गरेका छन् । भिडियो